Ucingo lwase China lweenkomo, iigusha, amaxhama, uMvelisi wamahashe kunye noMthengisi | Pro kocingo
Ucingo lwefama luhlobo locingo olwaluka njengocingo lwekhonkco kodwa luyilelwe ukuvalelwa kwemfuyo enjengeenkomo, iigusha, amaxhama, ihashe. Ke, abantu bayibiza ngokuba "luthango lweenkomo" "ucingo lweegusha" "ucingo lwenyamazane" "ucingo lwamahashe" okanye "ucingo lwemfuyo".
PRO.FENCE ukwenziwa kocingo lwasefreyini kwinqanaba eliphezulu kwentsimbi yentsimbi kwaye uyiluke kunye ngoomatshini bokuluka ngokuzenzekelayo. Ucingo luye lwagubungela i-zinc ukuya kwi-200g㎡iye yamkelwa yi-anticorrosion yayo elungileyo kunye namandla aphezulu ngokunjalo. Ucingo lwethu lwefama luyakwazi ukumelana neemeko zemozulu ezibi kwaye lubambelele kwizilwanyana ezininzi ezomeleleyo. Oomatshini bokuluka esisisebenzisayo ngoku banokuqhubekeka ngeendlela ezahlukeneyo zokuluka kubandakanya iMonarch Knot, Square Deal Knot, Cross Lock knot kunye nobude obahlukeneyo, ububanzi becingo. Loluphi uhlobo lweqhina kunye neenkcukacha zokuzisebenzisa ezixhomekeke ekubeni zifuna ukubiya kangakanani izilwanyana. I-PRO.FENCE inokubonelela ngesisombululo esenziwe ngokupheleleyo ukugcina uluhlu lwezilwanyana ezahlukeneyo lukhuselekile kwaye lukhuselekile.
Ngaphambi kokuba ukhethe ucingo lwasefama, kuya kufuneka uqwalasele malunga nohlobo lwemfuyo ojonge ukuba nayo. Olu lwazi luya kugqiba ukuba ucingo lwasefama lulungele iimfuno zakho. Ubungakanani bezilwanyana ezahlukeneyo kunye neempawu zokuziphatha zenza iimfuno ezahlukeneyo zobude, ububanzi becingo, uhlobo lweqhina. Njengamaxhama aqhutywa kuhola wendlela ukuba athabathe uxinzelelo ocingweni, ke ifuna ucingo oluqinileyo oluqinileyo kunqamlezo lweqhina kunye ne-6inch spacing. Kuba iinkomo ngokubanzi zezona zilwanyana kulula ukubiya kuzo, ke sicebisa uhlobo olunye lweqhina kwindawo enkulu kodwa ucingo oluphezulu. Kubalulekile ukuqonda lo mahluko oya kukunceda ukhethe ukubiya kwifama elungileyo.
Ubungakanani becingo: 2.0-3.6mm
Enemingxuma: 100 * 100mm / 70 * 150mm
Ububanzi: 30 / 50meters kuluhlu
Olu cingo lwefama lolwakhelwe ngocingo olukiweyo kwaye lwenziwe ngentsimbi. Kuza kubonelela ngokuqina okuphezulu kocingo kwaye uxhathise ukothuka kwezilwanyana.
2) anti-umhlwa Good
Ucingo lwenziwa nge-zinc camera ngaphambi kokuluka. Kwaye ukutyabeka kwe-zinc kufikelela kwi-200g /㎡ iya kudlala indima ekuchaseni umhlwa.
3) Kulula ukuyifaka
Ucingo lwefama lulula kwaye kulula ukuyifaka. Ifuna ukuqhuba iposti emhlabeni kuqala kwaye emva koko uxhome umnatha wocingo kwaye uyidinise ngezithuba ngokusebenzisa ucingo.
Isakhiwo esilula siza nezinto ezincinci ziya kunceda ukugcina iindleko. Ukupakisha kuluhlu kuya kusindisa ukuhanjiswa kwempahla kunye nokugcinwa kwayo.
Uhlobo olukiweyo lunokongeza ubhetyebhetye kocingo kunye nokuthintela ukothuka kwizilwanyana.
Into NO.: PRO-07 Ixesha Lead: 15-21 DAYS Imveliso Orgin: CHINA
Intlawulo: EXW / FOB / CIF / DDP Ukuhambisa iZibuko: TIANJIANG, CHINA MOQ: 20rolls
Egqithileyo Isangqa kabini Powder Camera wocingo olubiyele zobunjineli kaMasipala
Okulandelayo: Isefu ebiyelweyo yocingo olubiyele ulimo kunye nokusetyenziswa kwemizi-mveliso
Ucingo lweWelded olucingileyo